Home » Vaovao momba ny fitsangatsanganana » Ny filoha Macron avy any Frantsa & ny filoha Obama an'ny USA any Afrika
Ny fitsidihan'ny Lehiben'ny Fanjakana dia manao ny vaovao manerantany hatrany, ary ny kaontinanta Afrika dia nahazo olo-manan-kaja roa nandritra ny volana Jona sy Jolay izay afaka manampy an'i 'Brand Africa' fotsiny hitazomana sy hifandraisany amin'ny tontolon'ny fizahantany.
Ny fitsidihan'ny filoham-pirenena frantsay Emmanuel Macron tany Nizeria tamin'ireo firenen-kafa, ary ny filoha teo aloha Barack Obama tany Kenya sy Afrika atsimo, dia nanamafy ny fandrakofana ny kaontinanta afrikanina ary izany dia mety ho tsara ho an'ireo firenena mpikambana 54 ao amin'ny kaontinanta.
Eo amin'ny lafiny Seychelles, ny indostrian'ny fizahantany eto an-toerana dia manohy mampiakatra ny vidin'ny fandidiana ho fanambin'izy ireo lehibe. Ny filoha Danny Faure dia nitsidika manokana ireo trano fandraisam-bahiny tao amin'ny nosy Praslin sy La Digue tamin'ny herinandro lasa teo. Ny fahalianan'ny Lehibem-panjakana amin'ny indostrian'ny fizahantany dia raisina an-tanandroa, indrindra fa ny filoham-pirenena no filohan'ny fivorian'ny sori-paritry ny nosy, fony izy filoha lefitra ary noho izany dia nampahafantarina tsara ny fanambin'ny indostria Betsaka amin'ny nosy roa no nanakoako ny fangatahan'ny filoha mba hankasitraka fa ny hotely any Seychelles dia tsy nifaninana teo amin'izy ireo, fa norefesina tamin'ny Tour Operator Programs miaraka amin'ny fananana any amin'ny toerana fialantsasatra hafa. Ny fampitahana ny paoma ho an'ny paoma, na voasary ho an'ny voasary, no mahatonga ny firafitry ny Seychelles ho lasa ahiana. Ny filàna teti-bola ara-barotra ampy mba hahazoana antoka ny fahitana sy ny maha-zava-dehibe azy koa no antsoantso androany, toy ny omaly, ary ny iray andro talohan'io.
Satria eo amin'ny dingana farany amin'ny fiadiana ny amboara eran-tany FIFA 2018 isika, dia zava-dehibe ny famakafakana ireo ekipa mpilalao baolina kitra marobe efa nandrasan'ny rehetra hahita fandrosoana amin'ny fihodinana famonoana, fa kosa lasa nivadika ho amin'ny rivotra manify. Aza atao ambanin-javatra mihitsy, ny toe-tsaina ao ambadik'ireto lalao farany ireto, ary mitovy amin'ny toeran'ireo fizahan-tany izany. Ny filàna manavao tsy tapaka, ary avy eo mampita izay ataontsika mba hitazomana sy hifandraisany hatrany, no lakilen'ny fahombiazana. Zava-dehibe ihany koa ho an'ny toerana itodiana, (ny firenena) ny miaina mifanaraka amin'ny andrasan'ny mpitsidika azy.
Air France hampiakatra sidina mankany Kenya amin'ny taona ho avy